Waa kuma Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya? - Axadle | Axadle
Addis Ababa (Axadle) – Madaxweynaha Guddiga Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa madaxweynihii hore ee Ghana John Dramani Mahama u magacaabay ergaygiisa gaarka ah ee dhexdhexaadinaya xiisadda doorashada ee Soomaaliya.
Moussa Faki Mahamat ayaa bayaankiisa ku yiri: “Madaxweyne Mahama wuxuu la shaqeyn doonaa daneeyayaasha siyaasada Soomaaliya si loo gaaro tanaasul la aqbali karo oo ku saabsan xal buuxa si doorashada Soomaaliya loogu ilaaliyo waqtiga ugu yar ee ugu macquulsan.”
“Markii uu gudanayo waajibaadkiisa, wakiilka sare waxaa taageeri doona AMISOM si loo hubiyo habsami u socodka howlaha dhexdhexaadinta iyo nabad ilaalinta.”
Moussa Faki Mahamat wuxuu ugu yeeray daneeyayaasha siyaasada Soomaaliya inay si daacadnimo ah uga wada xaajoodaan oo ay ka hor mariyaan danaha iyo wanaaga dadka Soomaaliyeed sidii loo heli lahaa xal dhameystiran oo ku saabsan qalalaasaha doorashooyinka.
“Tani waa inay ka dhalataa dowlad si dimoqraadi ah loo soo doortay oo leh sharci iyo sharci dastuuri ah si ay wax uga qabato arrimaha haray ee siyaasadeed iyo kuwa dastuuriga ah ee halista ku ah xasilloonida dalka iyo gobolka guud ahaan,” ayuu yiri Moussa Faki Mahamat.
John Dramani Mahama, wuxuu dhashay November 29, 1958, wuxuu ahaa madaxweynaha Ghana intii u dhaxeysay July 24, 2012 ilaa January 7, 2017. Wuxuu horey u soo noqday madaxweyne ku xigeenka Ghana, laga bilaabo Janaayo 2009 ilaa July 2012.
Baahinta ayaa loogu magac daray kadib markii Madaxweyne Farmaajo uu ugu yeeray Madaxweynaha DR Congo iyo Madaxweynaha Midowga Afrika Félix Tshisekedi inay dhexdhexaadiyaan dhinacyada Soomaalida.
Wafdiga waxaa horay u magacaabay wakiilo ka socda beesha caalamka oo ku sugan Caasimadda Muqdisho. Si kastaba ha noqotee, Ururka Musharaxiinta kama uusan hadlin magacaabista markii lagu dhawaaqay qorshaha magacaabista.
Magacaabista ayaa timid markii R / wasaare Rooble uu ku baaqay in la qabto shir ay isugu imaanayaan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada 20-ka bisha May, mana cada doorka uu qaban doono ergayga cusub.